Ukuhlolwa Kokungavisisani Kwezimvo zika-Airbnb – inqaku loncedo
Sikholelwa ukuba inkqubo yezimvo esebenza kakuhle yileyo ezihloniphayo nezikhuselayo izimvo eziyinyani zentsapho yethu. Ngenxa yeso sizathu, sikuhoye kakhulu ukususwa kwalo naluphi na uluvo. Ungafunda Ipolisi Yezimvo Yakwa-Airbnb epheleleyo, kodwa ngamafutshane, le nto ithetha ukuba uluvo lusenokususwa ukuba:
Olo luvo lwaphula Ipolisi Yezinto Ezifakwayo yakwa-Airbnb,
Olo luvo luyakhetha, okanye
Olo luvo alunanto yakwenza nokuba bekunjani kuAirbnb kuloo mntu ulubhalileyo
Ayiloncedo: "Ungabathembi oonotaxi besi sixeko, bahamba ngezona ndlela zimbi!"
Iluncedo: "Ungabathembi oonotaxi besi sixeko, bahamba ngezona ndlela zimbi! Ngaphezu koko, ndifike kule ndlu ingalungiswanga kakuhle tu kwaye umbuki zindwendwe khange andiphendule."
Iluncedo: "Olu ndwendwe lufike emva kwexesha lokubhalisa xa lufika ibe luye lwandingxolisa ngokungakhawulezi ndivuke ukuze ndiluvulele. Ebekrwada kwaye echaphuka msinya lonke ixesha ebelihleli. Andinokukuvuyela ukumbona ukuba uba njani xa ekhathalela abantu."
Kwezinye iimeko, iindwendwe zisenokunikwa ithuba lokufaka izimvo zako nakuphi na ukubhukisha okurhoxiswe emva ko-12:00 kusasa ngosuku lokubhalisa xa ufika.
Ukuba ukhetha ukushiya uluvo lokubhukisha okurhoxisiweyo, sicela ukuba uluvo lwakho luchaze ukuba bekunjani kuwe, nokuba loo nto ithetha ukufumana izimvo ngokuncokola, ukwaphulwa kwemithetho yekhaya, iingxaki kwindlu ngexesha lokubhalisa xa ufika, njl. Ungalibali ukuba, ukuba khange ubhalise xa ufika, usenokungabinazo izimvo ezifunekayo ngendawo, izinto ezinokusetyenziswa okanye ukulifanela ixabiso. Uluvo olushiyelwe ukubhukisha okurhoxisiweyo lusenokususwa ukuba inkcazelo efakiweyo ayizukuyinceda intsapho yethu (ngokomzekelo, ukukhathazwa kukurhoxiswa kohambo ngepleyini, njl) okanye ukuba undwendwe lurhoxise ukubhukisha ngenxa yeemeko ezingenanto yokwenza nendlela ebeluhleli ngayo kuAirbnb.